Taxanaha Lamaanaha & Jaceylka Iyo Qeeybta Shanaad Ee Warbixintaan Ka Faalooneysa Arimaha Qoyska .
Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Friday, 10 Nov 2017 15:37 PM / No Comments
Dhaman asxaabteena waad ku mahadsan tihiin waxaan idin heeynaa qodobo kaa caawinayo kaabiyaasha sida aad jaceyl ku kasabaneyso.
*Xushmadda:-Xushmadda waa mid muhiim u ah la dhaqanka wanaagsan ee dadka , waa dabeecad safka hore ee kaga jirta dhaqan wanaagsan , waxaa ay lagama maarmaan u tahay in la abuuro farxad iyo is jaceyl.
Labada qof ee is xushmeeysa waa ay isu soo hiloobaan , balse labada aan is xushmeyn isuma soo hiloobaan, iskumana raaggaan haddii ay wada joogaan.
Waxaa ugu horeeya ee uu qof xushmeyn karo waa naftiisa , qofkii naftiisa kuguma aamino xushmad ka weyn oo uu ku siin lahaa ma jirto, haddii uu jaceyl kuugu laro xushmaddana kaba sii wanaagsan.
Qofka dadka xushmeeya ayaa hela xushmad iyo ixtiraam badan, inta isxushmeysana waxaa ugu wanaagsan lamaanaha waayo bulshada ayaa isugu dhaw oo qoys ah noloshuna qoyska ayaa ay ka bilaabataan.
*Isa-siinta:Haddii aad rabto in lagu jeclaado adiga qofka isa sii oo jeclow, jeclow micneheeda waa nafsadaada u hibee isagana tiisa ha kuu hibeeyee, badi naxriista iyo farxada hadba wixii aad kasbato ayaa aad kasbataa aad mirahooda guraneysaa.
Is-siintu waxaa ay keentaa is aaminaad, is aaminaaduna waxaa ay keentaa is jecayl dhameystiran.
*Xiriiridda:Sida ay labada qof u xariiraan waxaa ay qeyb qaadataa dhisamaha qoyska , dhismaha kalsoonida iyo isadkeynta.
Mar walba oo aad la xiriirto xaaskaaga ama gacalisadaada u sheeg in aad jeceshahay , hana ka xishoon in aad ku tiraahdo ”Waa aan kuu xiisaa mar walba, waa aan ku jeclahay, ”.Orhayo macaan , dhoolllacadeyn iyo jalleeco, waayo waxaa ay sad unoqonayaan marka aad kala maqan tihiin.
*Ka go’naanta:-Mabda’a adag oo aan leexleexad lahayn ayaa asal u ah jaceylka walba oo guuleysta .haddii aad dooneyso in aad ku guuleeysto hadafkaaga jaceyl waa in ay adiga kaa go’naato inaad jaceyl dhab ah u qaaddo lamaanahaaga.
La imow rabitaan sax ah oo dhameystiran , una muuji mar walba muxxibada aad u qabto dhiggaaga , waayo mabda’a adigi waxaa uu adkeeyaa salka xiriirkaaga , waxaa uu kordhiyaa is aaminaadda , waxaa uuna qofka geliyaa kalsooni.
Gabar uu dhalay oday soomaaliyeed oo maalqabeen ah ayaa waxaa aus jeclaadeen wiil ay wax isla baran jireen oo aan reerkiisa maalqabeen ahayn, gabadha aabaheed waxaa uu la rabay wiil uu adeer u yahay ee soo korsaday,gacan yarana u ah, gabadhii waxaa ay maqashay sheeko hoosaddii guriga ka socotay in ay waalidkeeda u sheegto wiilka ay is jecel yihiin.
Waxaaa ay u tagtay aabeheeda waxaana ay ku tiri ”Aabe aniga wiil aan wax isla barano ayaan jeclahay, isagane waa uu i jecel yahay , ee waxaan rabaa inaad sii ogaato.
Gabadhii aabeheeda waa uu ku gacan seeray in gabadhii uu sheekadaa ka caawiyo , waxaana uu ogaaday inuu yahay mid ay gabadha ku diidan tahay guurka ina adeerkeeda.
Gabadhii aabeheeda waxaa ay u sheegtay in wiilkaas ay galeen balan adag , sidoo kalena aysan balanta uga bixi karin , mana dooneyso wiil aan isaga ahayn.
Reerkii markii ay ogaadeen sida ay oga go’an tahay balanta ay la gashay wiilka ay is jecel yihiin waxaa ay ku dheheen wiilka noo keen.
”Inoo keen ninka aad balanta la gashay aan kula aragnee,” Markii wiilkii la baray reerka waxaa ay la dheceen akhlaakhdiisa iyo sidoo kale dabeecadiisa, kadibna waxay u guuriyen gabadhii.
Tani waxaa ay tusaale wanaagsan u tahay ka go’anaanta iyo wax is fahamsiinta, laakiin qofka aad dooraneyso ee aad ku mtido waa in uu ahaado qof sidaada oo kale ay uga go’an tahay sila markaasna leh diin iyo dabeecad wanaagsan leh.
…….Lasoco Qeeybaha Kale Ee Cutubkaan..